ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး ဘုတ်အဖွဲ့ အပေါ် အသီးသီး ရှုံ့ချခဲ့ကြတဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် နဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ် - SPORTS MYANMAR
လာမယ့် ရာသီ အတွက် ပထမဆုံး ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှု အဖြစ် အေဂျက်ဇ် အသင်း ရဲ့ မော်ရိုကို လက်ရွေးစင် တောင်ပံ ကစားသမား ဟာကင် ဇီယက်ချ် ကို ခေါ်ယူထားတဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ နောက်ထပ် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှု တွေ ထပ်မံ ပြုလုပ်သွားဖို့ အကြိတ်အနယ် ဆက်လက် ကြိုးစား နေပါတယ် ။
လတ်တလော ကာလမှာ ဒီရာသီ ဘာစီလိုနာ မှ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် သို့ အငှားထွက်ကစားနေတဲ့ ဘရာဇီး တောင်ပံ ကစားသမား ဖီလစ်ပီ ကော်တင်ဟို နဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း တို့ အကြား အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟလ က အတော်လေး ပြန့်နှံ့ နေပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ဖက်ကလည်း အသင်းကနေ ထွက်ခွာလိုနေတဲ့ ကော်တင်ဟို ကို ပေါင်သန်း ၉၀ နဲ့ ပြန်ပြီး ရောင်းချဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာ ဝါရင့် တောင်ပံ ကစားသမား ၂ဦး ဖြစ်တဲ့ ဝီလီယံ နဲ့ ပတ်ဒရို တို့ဟာ ဒီရာသီ အကုန်မှာ ချယ်လ်ဆီး ကို စွန့်ခွာဖို့ များနေပေမယ့် ၊ တောင်ပံ တိုက်စစ် အတွက် တနေရာစာလောက်ပဲ ထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုပါတော့မယ် ။ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ပစ်မှတ် တွေထဲမှာ ကော်တင်ဟို ပါဝင်နေပေမယ့် ဒါဟာ အလောင်းအစား ဆန်တဲ့ ခေါ်ယူမှု သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကော်တင်ဟို ဟာ လီဗာပူး က ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက် သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံ တွေ လုံးဝ ပျောက်ဆုံး ခဲ့ရသလို ၊ ဘိုင်ယန် ကို အငှားထွက်ကစားတဲ့ အခါမှာလည်း ထင်သလောက် ခြေစွမ်း က မတိုးတက်လာတာ ကို တွေ့ရပါတယ် ။ အရင် ခြေစွမ်းပြဖူးတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ပြန်ပြောင်းချင်တဲ့ ကော်တင်ဟို ကို ချယ်လ်ဆီး အနေနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အတော်လေး စဉ်းစား ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီ ရက်ပိုင်း အတွင်း ထွက်လာတဲ့ သတင်း တွေ အရတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ အခြား ပစ်မှတ် တွေကို အကုန် လက်လျှော့ထားပြီး ကော်တင်ဟို ကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အကြိတ်အနယ် ကြိုးစားနေတယ် လို့ သိရပါတယ် ။
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း တဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် ကတော့ ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဟာ မေဆင်မောင့် လို အလားအလာကောင်းတဲ့ လူငယ် တယောက် ရဲ့ အခွင့်အရေး တွေကို လျှော့ချနေတာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ကြောင်း အခုလို ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် က ” အရိုးသားဆုံး ဝန်ခံရရင် ကော်တင်ဟို ဟာ ချယ်လ်ဆီး အတွက် မှန်ကန်တဲ့ ခေါ်ယူမှု တခု ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကလည်း မတန်တဆ ကို များပြားလွန်းပါတယ် ။ သူဟာ အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ ကစားသမား တယောက် ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် သူ့ဆီကနေ သွင်းဂိုး အလုံအလောက် မျှော်ကိုးလို့ မရပါဘူး ။ ခင်ဗျား ဆီမှ မေဆင်မောင့် ရှိနေပြီလေ ။ ”
” ဖရန့် ( လမ်းပတ် ) ဟာ လူငယ် တွေ အပေါ် မှာ ယုံကြည်မှု များစွာ ထားတတ်သူ တဦးပါ ။ ဒါတွေကို မေဆင်မောင့် ၊ ခရစ်တီယန် ပူလီဆစ် တို့လို ကစားသမား တွေကို နေရာပေးခြင်း နဲ့ သက်သေပြထားပြီးပါပြီ ။ ပတ်ဒရို နဲ့ ဝီလီယံ တို့ဟာ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခါနီး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ။ ”
” ဒါပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ အပိတ်ခံထားရပြီးမှ ပြန်လုပ်ခွင့် ရတဲ့ အချိန် မှာ ကစားသမား တယောက် အတွက် ပေါင် ရ၅ သန်းလောက် အသုံးပြုပြီး ခေါ်ရလောက်အောင် ကြိုးစားတဲ့ အသင်းမျိုး ကျွန်တော် တခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး ။ ကော်တင်ဟို ကို ကျွန်တော် နှစ်သက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ခေါ်ပြီး ဘာကြောင့် မေဆင်မောင့် အတွက် အခွင့်အရေး တွေကို လျှော့ချပစ်မှာလဲ ? မောင့် ဟာ မကြာမီ မှာ ထိပ်တန်း အဆင့် ကစားသမား ဖြစ်လာတော့မှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဂယ်ရီ နဗီးလ် ကလည်း ” ကော်တင်ဟို ကို ချယ်လ်ဆီး တို့ ခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ဟာ တခြား အပြိုင် စကြာဝဠာ က သတင်း တပုဒ် လိုပါပဲ ။ မနေ့ကပဲ ဆီဆာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ က ဦးဆောင်ပြီး ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် ၃ပတ် က လစာရဲ့ ၁၀ – ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဖြက်တောက်ဖို့ သဘောတူညီမှု ရလုနီးပါး ရှိနေပါပြီ ။ ”
” အခု ကျပြန်တော့ ဖီလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ကို ပေါင် ရ၅ သန်း သုံးပြီး ခေါ်တော့မယ် ဆိုတော့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တွေ ဘယ်လို ခံစားကြမလဲ ? ကျွန်တော် သာ ချယ်လ်ဆီး အသင်းသား တယောက် နေရာ ကနေ ဆိုရင် လစာ ဖြတ်မယ့် အစီအစဉ် ကို ကန့်ကွက်ဖို့ ကြိုးစားမိမှာပါ ။ ”
” ကလပ် အသင်း ဖက်က သူတို့ရဲ့ ဘတ်ဂျက် ကို မြှင့်တင်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကစားသမား တယောက် ကို ပေါင် ရ၅ သန်း သုံးပြီး ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျား အနေနဲ့ လက်ရှိ အသင်းသား တွေရဲ့ လစာ ကို အရင် ထုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ် ။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ က အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး ။ သဘာဝလည်း မကျပါဘူး ။ ” လို့ ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။